Nagarik Shukrabar - डमरु सोनिका !
शनिबार, २७ असार २०७७, ०२ : २२
डमरु सोनिका !
शनिबार, ०७ भदौ २०७६, १२ : १२ | शुक्रवार
पुर्वयुवराज पारस शाहलाई मोडल सोनिका रोकाया ‘बाघ’ सम्बोधन गर्छिन्। सोमबार त्रिभुवन विमान स्थलमा प्रहरीलाई चेकजाँचका क्रममा हातपात गरेपछि पारस विवादमा तानिए। प्रहरीले उनका छोरा र भान्जालाई चेकजाँच गर्न खोज्दा उनले प्रहरीमाथि हातपात गरेका हुन्।